२३ वर्षदेखि महाकालीको स्रोत विवाद | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कोहलपुर घटना : गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
साग पुरुष क्रिकेटमा नेपालले जित्यो कास्य →
काठमाडौं : भारतसँग महाकाली सन्धि भएको २३ वर्ष भयो। उत्ति नै समय भयो महाकाली नदीको स्रोतको कुरा औपचारिक रूपमा उठेको। तर, भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा निकालेपछि नेपालमा नेताहरूबीच आरोप÷प्रत्यारोप चलेको छ। भारतसँग सन्धि गर्न भूमिका रहेका तिनै नेता ‘जुहारी’ खेलेर समस्या सल्टाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जानकार बताउँछन्। नेपालले २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको थियो। त्यस बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले एमालेको समर्थनमा भारतसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता थिए।
एमालेले २०५२ चैत २० गते केपी ओलीको संयोजकत्वमा सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल संयोजक ओली र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराबीच त्यस’bout पटक–पटक पत्राचार भएको थियो। एमालेले उठाएका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय राजदूत केभी राजनबीच पनि पत्राचार भएको थियो।
भारतीय प्रतिनिधिले सन्धि अनुमोदनका क्रममा बोलेका कुरा र सरकार प्रमुख तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएका सहमति भारतले तोडेको उनी बताउँछन्। ‘एकतर्फी नक्सा निकाल्न भारतलाई कूटनीतिक रूपमा मिल्छ ? ’, उनको प्रश्न छ।)अन्नपूर्ण )